Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya iyo Gaafow oo safar shaqo ku joogo Norwey - NorSom News
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya iyo Gaafow oo safar shaqo ku joogo Norwey
Wasiirka arimaha dibada dowlada Soomaaliye Cabdisalaam Cumar Hadliye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaal shaqo kujoogo Norwey, isaga uu ka qaybgalayo kulanka wasiirada arimaha dibada ee dalalka afrika qaarkood iyo dalalka la isku yiraacdo NORDIC. Kulankan oo ah mid sanad walbe dhaca ayaa sanadkan waxaa marti galiyay dowlada Norwey, waxaana kulan hogaamin doono wasiirka arimaha dibada dowlada Norwey ee Børge Brende.
Sida ay warbaahinta NorSom News kasoo xigatay war rasmi ah oo kasoo baxay wasaarada arimaha dibada ee Norwey, waxa uu kulankan furmi doonaa maanta, waxaana lasoo gaba gabeen doonaa maalinta bari ah. Waxaana waxyaalaha looga hadlayo ee miiska saaran ugu waaweyn kobcinta shaqaalada wadamada Afrika, dadka soo usoo tahriibayo qaarada yurub iyo waliba arimaha xagjirnimada oo dhaawac dhaqaale iyo mid amniba ku hayo dowlada afrika qaarkood.
Sida aan ku helayno warar hoose, waxaa wafdiga wasiirka arimaha dibada kamid ah, madaxa laanta socdaalka ee dowlada soomaaliya General Abdullahi Gaafow. Waxa ayna tani kusoo aadaysaa mudo bil iyo bar ah kadib, markii ay dowlada Norwey soo saartay go aan ah inay wadankii dib ugu celinayso soomaalida aan wali qaadan sharciga degenaanshaha(permanent oppholdtillatelse). Sida aan ognahay Gaafow waxa uu laba mar oo hore yimid wadankan Norwey, mar uu la socday wasiirkii hore ee arimaha Gudaha Soomaaliye Cabdisamad Macalin iyo mar uu kaligi ahaa, markana waxa ay noqon doontaa markii sadexaad.
Wixii kusoo kordha socdaalka wasiirka arimaha dibada ee Norwey iyo General gaafow kala soco warbaahinta NorSom News
Previous articleWasiirka dastuurka iyo cadaalada Norwey oo laga codsaday inuu ka jawaabo arinta gabadha soomaaliyeed
Next articleDhalinyaro dhexda u xiratay badbaadinta ubadka soomaaliyeed ee gobalka Østfold.